Antony 4 anefa farafahakeliny, raha ny tombana navoakan’ny fiarahamonim-pirenena Rohy, no azo ilazana ho tsy maharesy lahatra ny finiavan’ny fitondrana hiady amin’ny kolikoly marina. Voalohany aloha dia ny fitarazohan’ny fanapahana mikasika ny lalàna momba ireo harena azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna izay efa nandefasan’izy ireo taratasy misokatra tamin’ny filoham-pirenena Malagasy ny volana mey 2019 teo. Mampametra-panontaniana koa ny antony nanenana 44% ny famatsiam-bola ny fitsarana miady amin’ny kolikoly na PAC. Lasa 3,9 miliara ariary raha toa 7 miliara teo aloha. Mampametra-panontaniana hatramin’izao ny tena andraikitry ny fitsarana avo (HCJ) sy ny fitsarana manokana momba ny andramena sy hazo sarobidy ary fahefatra moa dia tsy mazava koa ireo paikady hiadiana amin’izany kolikoly izany ho an’ireo rafitra hanaraha-maso ny volam-panjakana, raha ny nambaran’ny Rohy hatrany.